Shiinaha Rubber daahan timo burush leh daabacaad midab leh warshad qabashada design iyo saarayaasha | Yongsheng
Burush timaha daahan Rubber leh daabacaad midab leh gacan qabashada design
Midabka: Madow, Guduud, Casaan, Buluug, Jaale, Dahab.
Burushka timaha suufka, buraashka timaha qaabkiisa oo kala duwan, burushka timaha wareega, burushka timaha hawo. Burushka timaha foosto ee Aluminium dhammaantood waa la heli karaa. Burushka timaha leh buraashka kubbadda leh, burushyada dilaaca ah ayaa u jilicsan madaxa oo timaha ma jiidi doonaan. Waxay ka dhigan tahay inaad farriin u dirayso madaxa markaad wax cadayanayso taas oo kordhinaysa wareegga, sidaas awgeedna gacan ka geysaneysa kor u qaadista timaha. Burushka timaha ee Ragga iyo Haweenka, Ku Wanaagsan Timaha Qoyan ama Qalalan, Timo Dheer Qafiif ah oo Curyaan ah Timaha dabiiciga ah iyo dhammaan noocyada timaha.
Qabashada leh naqshad saxan oo kala duwan. Textured non-siibiil naqshadeysan, xajin raaxo leh oo aan sahlaneyn inaad ka dhacdo. Qabso hoosta dalool, oo ku habboon in la dhigo. Qalab casri ah, ergonomic non-siibiil ah ayaa si khaas ah loogu talagalay inuu ku siiyo xakamaynta ugu badan iyo raaxada halka qaabeynta. Way fududahay in lagu gaaro natiijooyinka mihnadleyda saloon ee guriga leh burushkan timaha. Waxaad u dooran kartaa qofkasta oo aad jeceshahay dusha. Qaarkood waxay la noqon karaan taabasho jilicsan, qaar ka mid ah waxay la ahaan karaan naqshad midab leh, sidoo kale waxaad ku daabacan kartaa astaantaada goobta saxanka. Saxanku wuxuu noqon karaa midab iyo saameyn kaladuwan sida xamil ahaan, tusaale ahaan, waxaad midab ku rinjiyn kartaa saxanka iyo dahaarka caagga ee burushka. Iyo kubbadaha loo yaqaan 'pinballs' waxay noqon karaan isku midab saxanka oo ah hal taxane.
Hore: UV koronto, tarjuma biyaha, shuminta burushka timaha ee daabacan oo leh qalab loogu talagalay
Xiga: Liistada Liistada loogu talagalay Shiinaha ee loo yaqaan 'Customized Professional Classic Black makeup makeup Brush Set Face Brush Bushh'
Burushka Timaha dhoobada
Burushyada timaha oo qalooca
Timaha burush Rubber Bristle
Burush Timo Yar Yar
Nylon Pins Timaha Burushka